Utility ပြီးတော့ Utilized – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged Benifits, co-operative, Internet, storm, World of Conflict. Bookmark the permalink.
← MIT, Dreams and Ways
စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း အနုပညာ →
8 thoughts on “Utility ပြီးတော့ Utilized”
တောကျောင်း | February 6, 2009 at 12:42 pm
ကြည့်သည် မြင်သည် ဖြစ်ပေါ်သည်
ထို့ကြောင့် ဆိုခဲ့ပါ အကြောင်း သဘောတူသည်။
eveningstar | February 6, 2009 at 3:46 pm
ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပိုစ့်လေးကိုတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်လို့ပါ။ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး သဘောချင်း တိုက်ဆိုင်တယ်ပေါ့။
ကုမ်ရာသီသူ | February 6, 2009 at 4:06 pm
ဆရာတောကျောင်း၊ သဘောကောင်းလှချည်လားဗျ 🙂
ကုမ်ရာသီသူ | February 6, 2009 at 4:13 pm
သူငယ်ချင်းဖိုးကြယ်၊ ငါ ဂုဏ်ယူရမယ်ပေါ့ဟာ၊ 😀
ုkom | February 7, 2009 at 2:52 am
ကုမ်ရာသီသူ | February 7, 2009 at 3:19 am
ဟား၊ အမ KOM မှတ်ချက်ပေးသွားတာရော၊ လာလည်တာရော ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
AMMK | February 7, 2009 at 9:34 am
ကိုယ်လဲ ခုမှ တွေ့တယ် ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ blog ကို..နောက်လဲ လာမယ်
ကုမ်ရာသီသူ | February 7, 2009 at 6:07 pm
ချီးမွမ်းခံရတာဆိုတော့ ပျော်မှပျော်ပေါ့။ ကြိုဆိုပါတယ်နော် 😀